APIE ၏အပိုင်းအစ - စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ သတင်းလွှာ - Austin Partners in Education
APIE ၏အချပ်: စက်တင်ဘာလ 2020 သတင်းလွှာ
စကျတငျဘာ 8, 2020
ကျွန်ုပ်တို့သည် Austin ISD ကျောင်းသားအားလုံးကိုသူတို့၏ပထမတန်းကျောင်းတွင်အကောင်းဆုံးဆန္ဒရှိသည်။ ကျောင်းသားအများစုသည်အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်အထိဝေးလံခေါင်သီသောကျောင်းဝင်းပြင်ပသင်ယူမှုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကျောင်းပထမလေးပတ်အတွင်းဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
စာသင်နှစ်သစ်သည် APIE အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ဤနှစ်သည်ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြစ်စေသော်လည်းကျောင်းသားများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုမှာမကျဆင်းလာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများသည် Austin ISD ကျောင်းသားများအားခရိုင်မှအတည်ပြုထားသော virtual platform များမှတဆင့် ဆက်လက်၍ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဂရမ်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နွေလများအတွင်းကြိုးစားအားထုတ်သည်။
ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်၊ လေ့လာရန်အတွက်ဖွင့်လှစ် ဝဘ်ဆိုက်။ APIE သည် Austin ISD ၏ပြက္ခဒိန်နှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းသို့ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်လူမှုမီဒီယာအကောင့်များသို့နောက်ဆုံးသတင်းများပေးပို့လိမ့်မည်။
ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှိမ့်ချခံရပြီးကျောင်းသားများအပေါ်သင်တို့၏ကတိကဝတ်အတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ခြင်းအတွက် virtual စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများကိုအောက်တိုဘာလတွင်စမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောလိပ်အဆင်သင့်ဖြစ်မှုနှင့် GEAR UP ၀ န်ထမ်းများထောက်ပံ့သောအစီအစဉ်များကိုပြီးခဲ့သည့်နွေ ဦး ရာသီက virtual platform များနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီး၊
ဒီစာသင်နှစ်ဟာ APIE အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲများစွာကိုအမှတ်ရစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Austin ISD ၏ကြီးကြပ်ရေးမှူးအသစ် Dr. Stephanie Elizalde အားဒုဥက္ကChair္ဌအဖြစ်လက်ခံခဲ့ပြီး၊ သက်တမ်းတက္ကဆက်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ (၃) နှစ်စီမံကိန်းအတွက် Career Launch / P-TECH တိုးချဲ့မှုကိုထောက်ပံ့ရန် $450,000 ထောက်ပံ့ငွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများအတွက်သွားလာမှုလွယ်ကူစေမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်ကိုမကြာသေးမီကစတင်ခဲ့သည်။ မွမ်းမံမှုများအားလုံးကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်သည် www.austinpartners.org.
ဤစာသင်နှစ်သည်ယခင်နှစ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။ သို့သော်အတူတကွကျွန်ုပ်တို့သည်စိန်ခေါ်မှုများကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြောင်းလဲမှုအတွက်အခွင့်အလမ်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့ထောက်ပံ့မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Virtual Volunteering ဒီနှစ်ကျတော့မယ်
Virtual စေတနာ့ဝန်ထမ်းခြင်းသည်သင့်အိမ်မှကျောင်းသားများကိုလုံခြုံစွာအစေခံရန်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြခြင်းနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများကိုစက်တင်ဘာလလယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တိုက်ရိုက်ဖော်ပြပေးမည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းခြင်းကိုအောက်တိုဘာလတွင်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ထိုအတောအတွင်းသင်သည်ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည် သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြသင်တန်း နှင့် ဆရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စာသင်နှစ်သစ်ကိုလိုဂိုအသစ်နှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသစ်ဖြင့်စတင်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီက IBM တွင်ကောင်းမွန်သောလိုဂိုနှင့်အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ HMG Creative သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုဂိုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်ကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်ပြန်လည်ကြည့်ရှုပုံအကြောင်းကိုသင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည် ဒီ blog post။ သင်၌အခွင့်အရေးမရရှိပါကထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပါ https://austinpartners.org.
APIE က $450,000 ရန်ပုံငွေကိုလက်ခံရရှိသည်။
ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် APIE မှ $450,000 ထောက်ပံ့ငွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် သာ။ ကွီးမွတျတက္ကဆက်ဖောင်ဒေးရှင်း လာမည့်သုံးနှစ်အတွင်း Austin ISD တွင် Career Launch / P-TECH အစီအစဉ်များကိုတိုးချဲ့ရန် (GTF) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းသုတေသနတွင်ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မည် Akins အစောပိုင်းကောလိပ် High School တွင် ဒီနှစ်ကျရင် Career Launch / P-TECH အစီအစဉ်နှစ်ခုကိုစတင်တော့မှာပါ။ (Austin Realtors ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအိမ်ခြံမြေအစီအစဉ်နှင့် Austin ISD နှင့်ဒေသခံတက္ကသိုလ်သုံးခုနှင့်ပူးပေါင်းပြီးသင်ကြားမှုအစီအစဉ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤစီမံကိန်းအသစ်ကိုကြီးကြပ်ရန်အတွက်သုတေသနနှင့်စီမံကိန်းမန်နေဂျာအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာသေးမီကငှားရမ်းခဲ့သည်။ ငါတို့လာကြည့်ပါ ကြေငြာချက်များ ဤစီမံကိန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်စာမျက်နှာကိုဆွဲချပါ။
သာ။ ကွီးမွတျစီးပွားရေးဆုပေးပွဲ 2020
Austin ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်အတူ“ ထူးခြားသော Austin” ဆုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ လာကြည့်ပါ လူထုမဲပေးမှုစာမျက်နှာ သင်၏မဲချပစ်ရန်။ သင်တစ်ကြိမ်သာမဲပေးနိုင်သည် ငါတို့သည်သင်တို့၏မဲနှင့်ထောက်ခံမှုတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်! #GABA2020
နောက်တစ်ခုAPIE Virtual စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူမေးခွန်း & အဖြေနောက်တစ်ခု